ရယ်ခြင်ရင်ရယ်ကြရအောင်(၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရယ်ခြင်ရင်ရယ်ကြရအောင်(၂)
Posted by Don Juan Ronald on Oct 7, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle | 1 comment
ပြည်ထောင်စုဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမတနိုင်ငံတော်ကြီးမပြိုကွဲခင်တုံးက၊အမေရီကန် tourist တဦးသည် Moscow မြို့တော်တွင်လျှောက်လည်ရင်းနှင့်အလွန်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်တခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်၊၎င်းတွေ့ရသောဖြစ်ရပ်မှာလမ်းဘေးတွင်ထူးခြားစွာအလုပ်လုပ်နေသောမြူနီစပါယ်အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ရှိပါသည်၊အလုပ်သမားတယေါက်သည်ရှေ့မှာမြေကျင်းကိုတူး၍နောက်အလုပ်သမားသည်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတူးပြီးသောကျင်းများကိုမြေဖြင့်ပြန်ဖို့လိုက်သည်၊ဤကဲ့သို့တူးလိုက်ဖို့လိုက်ဖြင့်လမ်ဘေးတလျှောက်လုံးဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်သွားနေသည်တွေ့မြင်ရသည့်အဲဒီအမေရီကန်သည်နောက်ဆုံးမနေနိုင်လို့မြေဖို့နေသောအလုပ်သမားကိုအကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်လေတော့သည်၊ထိုအခါအလုပ်သမားဖြေလိုက်သောအဖြေကား “ ကျနော်တို့ရဲ့အလုပ်ကသုံးယောက်တဖွဲ့ဖြစ်ပြီးရှေ့ကတယောက်သည်မြေကျင်းတူး၊ဒုတိယလူကအပင်စိုက်၊ပြီးရင်ကျနော်ကမြေပြန်ဖို့ရပါသည်၊ဒီနေ့ဒုတိယလူကခွင့်ယူထားတော့ယခုလိုသူကကျင်းတူးကျနော်ကမြေဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ ”ဟူသတည်း။
လူကြီးများဟုဆိုရာ၌ဗိုလ်များသော်၎င်း၊အရပ်သားများကိုအနိုင်ကျင့်လေ့ရှိသောအရာရှိကြီးများအတွက်သော်၎င်းမဟုတ်ပါ Adult များကိုဆိုလိုပါ၏။
ဂျပန်ပြည်ဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံး၌အထက်တန်းစာရေးမရာထူးကိုရရှိထားသောအပျိုကြီး(၃၂နှစ်)မစ်စ် ခီမီုးဂျီးနှေး သည်၊အလုပ်တွင်အဆင်ပြေပြီးအိမ်ထောင်မပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်၊တိုကျိုမြို့ပေါ်၌တိုက်ခန်းတခန်းလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသည်၊ရွာမှာနေသောဖခင်လည်းသူမကိုမကြာခဏလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်၊လာသည့်အခါတိုင်းလည်း၊မအသက်ကြီးရင့်လာသောအချိန်အဖော်လိုကြောင်း၊သူမကိုအိမ်ထောင်ပြုဖို့တိုက်တွန်းသည်၊သူမလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆင်ချေပေး၍လွဲရှောင်နေသည်။
ဒီတကြိမ် မစ်စ် ခီမီုးဂျီးနှေး ၏ဖခင်သည်သမီးစီမှာအနည်းငယ်ကြာကြာနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်၊ဒီလိုနှင့်နေခဲ့သည်မှာအဖိုးကြီးသည်ညညအိပ်မပျော်သောအခါ၊သမီး၏အခန်းမှထူးဆန်းသောအသံ Electric shaver ၏အသံလိုလို တဇိဇိနဲ့မြည်နေသည်ကိုအမြဲကြားနေရသည်။တရက်ကြတော့အဖိုးကြီးလဲမနေနိုင်တော့ဘဲ၊စပ်စုသောစိတ်ဖြင့်သမီး၏အခန်းထဲဝင်ကြည့်လေသည်၊သမီးရဲ့ခေါင်းရင်း၌အမျိုးသားများ၏ဟိုဟာနဲ့တူအောင်ပြုလုပ်ထားသော Vibrator တခုကိုတွေ့ရှိ၍ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သောအခါ၊ညညကြားရသောအသံသွားဖြစ်နေသည်၊ထိုနေ့ညနေပိုင်း မစ်စ် ခီမီုးဂျီးနှေး အလုပ်မှပြန်လာသောအချိန်တွင်သူမ၏အဖေသည်စက်တီစားပွဲပေါ်၌သူမဝယ်ပေးထားသော ဂျော်နီလမ်းလျှောက် ကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီး၊ Vibrator လေးကိုဖွင့်၍၊အဲဒီ Vibrator လေးကလည်းခေါင်းလေးကိုရမ်းပြီးတဇိဇိနဲ့မြည်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ထိုအခါသမီးသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍ “ ဒီမှာအဖေလွန်လာပြီနော်၊ကျမရဲ့ privacy ကိုကျူးလွန်လာပြီနော် ”
သူမ၏အဖေလည်းအရက်လေးမမူးတမူးနဲ့ “ သမီးကလည်းကွယ် ဖေဖေကပျင်းနေလို့ဖေဖေ့သားမက်နဲ့ဂျော်နီလေးမော့နေတာကိုလွန်တယ်လို့ထင်သလားကွယ် ”ဟူသတည်း။
ဆို(ဆိုချင်တာဆို………) ရှယ်(ရှယ်ယာရပြီးရင်……..) လစ်(လစ်မယ်…small လေးဆီကို……)